Ku xigeenkii hoggaamiyaha maleeshiyada ISIS oo lagu dilay Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaKu xigeenkii hoggaamiyaha maleeshiyada ISIS oo lagu dilay Muqdisho
Hoggaamiyaha ISIS Cabdiqaadir Muumin oo la hadlaya maleeshiyadiisa. [Sawir Hore]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ku xigeenkii maleeshiyada ISIS ee Puntland Mahad Macalin ayaa lagu dilay Muqdisho, sida maanta oo Talaado ah ay ku warantay laanta Af-Soomaaliga ee BBC, oo soo xiganaysa qoyskiisa iyo ilo-wareed katirsan sirdoonka Puntland.
Dilka Mahad ayaa la sheegay in uu dhacay todobaad kahor, sida ay sheegtay BBC Soomaali.
Niman hubeysan ayaa la sheegay in ay dileen Mahad kadibna ay maydkiisa dhigeen xeebta Liido ee Muqdisho.
“Waxaa dilay rag hubaysan oo meydkiisa soo dhigay xeebta Liido, ka dibna telefoon nagu soo wacay oo nagu wargeliyey in aan meydka doonano,” dad ka mid ah ehelada Mahad Macalin ayaa sidaa BBC Soomaali u sheegay.
Sidoo kale ilo katirsan sirdoonka Puntland ayaa BBC u xaqiijiyay in ku xigeenkii ISIS lagu dilay Muqdisho, iyaga oo intaas ku daray in sargaal sare oo katirsan maleeshiyada uu ka dambeeyay dilka Mahad.
BBC-da ayaa warbixinteeda ku sheegtay in sababta ka dambeysa dilka Mahad ay tahay arrin la xiriirta loolan dhanka hoggaanka maleeshiyada ah, iyada oo hoggaamiyaha ISIS Cabdulqaadir Muumin uu xanuunsanayo.
Horaantii sanadkan, Mareykanka ayaa liiska xayiraada ku daray Mahad Macalin.
Garoowe-(Puntland Mirror) Raysulwasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax ayaa maanta oo Khamiis ah lagu aasay magaaladii uu ku dhashay ee Garoowe. Xasan Abshir Faarax ayaa Axadii ku geeriyooday dalka Turkiga halkaas uu muddo ku [...]